fikradaha lagu soo bandhigay Bar. TEDx Muqdisho, Live SNTV | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA fikradaha lagu soo bandhigay Bar. TEDx Muqdisho, Live SNTV
fikradaha lagu soo bandhigay Bar. TEDx Muqdisho, Live SNTV
Guddoomiyaha gobolka Banaadir, hiigsigeyga waa in Muqdisho ay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu horreeya, waxaan dhiiragelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho uga shaqeeya Iskaa Wax u Qabso.
Waxaan u mahacelinayaa dadka dedaallada Muqdisho lagu dhisayo sameeyey ee bilaabay, waxaana u istaagi doonnaa dhammaanteen sidii aan uga wada qeyb-qaadan lahayn dhismaha caasimaddeenna Somaaliyeed.
Barnaamijka Iskaa Wax u Qabso, waxaa lagu dhisay caasimadaha dalalka Suuriya iyo UK, kuwaas oo horey ugu bururay dagaalladii dalalkaas ka sooo dhacay, waxa uu intaa raaciyey in uu dhiiragelinayo howshaan oo Muqdisho aad muhiim ugu ah.
Wasiirka Howlaha guud iyo Guryeynta Cabaas Siraaji, aaa TEDx Muqisho ka jeediyey khudbad, waxa uu ka sheekeeyey taariikhda noloshiida.
“waxaan ku noolaa xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee Dha-dhab dlaka kenya, halkaas ayaan ku soo barbaaray, runtii waxaa ka jirtay xaaladda, adag, heerarka waxbarasho oo dhan ilaa jaamacadda, Gaarisa iyo Nairobi ayaan ku soo qaatay, hey’adda Q.M beeraha qaabilsan ayaan shaqo ka helay sannadkii 2011-kii oo ay dalku ka jiree abaaro ba’an, waxaa muhiim ah inaan micno u yeelno taariikhdaas, si aan dadkeyga iyo dalkeyga uga faa’ideeyo, waa midda ugu abuurta inaan yeesho hammi siyaasadeed, taasoo aan ogaa in ay caqabado badan kala kulmi doono” ayuu yiri wasiirka howlaha Guud ee Xukuumadda Soomaaliya.
Ujeedada arrintaasi waxa uu ku tilmaamay in ay sidii uu uga qeyb-qaadan lahaa isbadelka ka socdey dalka, annigana waxaan ku dedaalay sidii aan u baraarujin lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed, isbadelkii siyaasadeed ee doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay ayaana keeentay inaan maanta halkaan soo gaaro, waa tusaale ay sameeyeen dhallinyarada Soomaaliyeed ayuu raaciyey wasiirka Howlaha Guud ee Soomaaliya Cabaas Siraaji.
Naciima Abwaan Qorane, ayaa TEDx Muqdisho iyaduna ka jeediyey khudbad, waxa ay diiradda saartay, sida ay lagama-maarmaan u tahay dhallinyarada Soomaaliyeed in ay qaataan doorkooda oo ay badbaadiyaan dalkooda, iyagoo dhan walba u istaagaya horumarinta, ilaalinta iyo sare u qaadidda magaca Soomaalida, Gabey ay kula hadleyso dhallinyarada ayeeyna madasha ka jeedisay.
Previous articleGuddoomiyaha gobolka Banaadir oo khudbad ka jeediyey Bar. TEDx Muqdisho
Next articleShirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay Maareynta Maaliyadda, Qorshaha ka hortaga Musuqmaasuqa iyo arrimo kale